Madaxweynaha DFKM oo booqday Degmooyinka magaalada Muqdisho qaarkood
Muqdisho:-Madaxweynaha DFKM Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa saaka kormeer ku tagay jiida hore ee difaaca ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM waxaana uu dardaaran kooban u jeediyey ciidamada DFKM oo ku sugan qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha DFKM Sheekh Shariif Sh Ahmed Ayaa waxaa uu kormeer ku tagay xarumo ay ka mid yihiin Garoonka Studio Muqdisho ,Carafaat, Warshaddii Baastada, SOS iyo Qubuurihii hore ee Talyaaniga iyo dhismayaashii caymiska qaranka waxaana uu warbixino kala duwan ka dhageystay saraakiisha ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM.
Madaxweynaha DFKM Sh Shariif Sh Ahmed ayaa u balan qaaday ciidamada DFKM in la siin doono mushaaradooda wuxuuna ugu baaqay in ay is maqlaan soona qabtaan kuwa ciidanka ka tirsan ee dhaca u geysanaya shacabka masaakiinta ah.
Shariif Sh Ahmed madaxweynaha DFKM ayaa ka codsaday Guddoomiya Maxkamadda ciidanka DFKM Gaashaanle Maxamed Xuseen Muungaab in uun maxkamad uu ka hergaliyo deegaanka SOS .
Waa markii ugu horeysay oo uu kormeer ku tago madaxweynaha DFKM Sh Shariif Sh Ahmed degamooyinka aan ku xusnay tan iyo intii ciidanka Al-Shabaab ay baneeyeen magaalada Muqdisho inteeda badan .